> Resource > Video > Sida loo dar SRT in MKV
Fursadda in aad rabto in aad ku darto SRT in MKV videos. Biirtay subtitles SRT la files MKV run ahaantii waa wax sidaas u dhib badan, waxaad u malaynaysaa inta aad ka heli qalab sax ah si ay kaaga caawiyaan inaad yeeshaan. In halkan tutorial this, waxaan qeexi doonaa sida loo joogto ah lifaaq file Cinwaan SRT ah oo wuxuu galay file .mkv matroska ah si faahfaahsan.
Software aan u isticmaasho waa Wondershare Video Converter ( Video Converter Ultimate for Mac ). Kaliya ma Converter video ah, app this ayaa la siiyey hawlaha ka badan. Ku darista subtitles SRT in file video kasta waa mid ka mid ah qaababka ay qabow. Sidaas daraadeed waxaad u isticmaali kartaa sida SRT weyn oo Converter MKV inuu kaa caawiyo inaad ku milmaan subtitles SRT aad la MKV effortlessly gudbiyo. Ka dib markii in, aad ku raaxaysan karaan content yaabka digital la subtitles gudaha. Iyada oo taageero u ah, fahmaan videos shisheeye ama filimada fiican. Taasi waa sida.
1 Import MKV files si SRT si Converter MKV
Download, rakibi oo ay maamulaan app this. Ka dibna ku shuban aad files MKV Raadinayo ku daray subtitles SRT. Tag "Beddelaan" tab> "Add Files" doorasho inay dajiyaan files MKV aad rabto in aad ku darto subtitles ah. Haddii files MKV aad waa soo dhow yahay, oo kaliya kuwaa oo si app this.
2 midowdo SRT la MKV
In bar file video ah, dhufatey "Edit" button. In ka dhisayaa ilaa interface tafatirka, waxaa jira afar tabs dhanka bidix. Oo mid la soo dhaafay waa "Cinwaan" tab. Just u riix, ka dibna dajiyaan aad files SRT deegaanka by furitaanka liiska "Cinwaan" hoos-hoos. Haddii u baahan tahay, waxa kale oo aad samayn kartaa qaar ka mid ah goobaha kale ee sida baaxadda iyo midabka iwm Marka wax walba waa ok, kaliya ku dhacay "OK".
Fiiro gaar ah: app wuxuu kuu ogolaanayaa inaad si aad u eegto saamaynta in waqtiga dhabta ah. Marka hore birta ku dhuftay video item ee Murayaad bidix, ka dibna riix "Play" button hoos suuqa kala Falanqeynta dhankiisa midigta ah.
3 Beddelaan SRT in MKV
Ka dib markii aad ka dhergin saamayn video ah, oo aad dhoofin karo file cusub kaliya oo riixaya badhanka "Beddelaan". Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira hal wax oo aad u baahan tahay inaad aragto. Waa in aad hubisaa in qaab wax soo saarka waa MKV, ama aad u baahan tahay in ay doorasho ka mid ah liiska qaabka wax soo saarka. Si aad u samayn, riix qaab icon ee "Qaabka Output" Murayaad in la furo suuqa kala qaab wax soo saarka iyo ka dibna tag "qaab"> "Video"> "MKV". Si aad u ogaato faylasha cusub ka dib qaab beddelidda, waxaad riixi kartaa "Folder Open" button in interface ugu weyn. Just leeyihiin isku day ah!
Top 5 Alternative si Fraps
Sida loo ciyaaro YouTube videos in VLC media player